Golaha wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo 35% la kordhiyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGolaha wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo 35% la kordhiyay
May 29, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Shirka golaha wasiiradda oo internetka ka dhacay. [Isha Sawirka: Xafiiska Raysulwasaaraha]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Khamiistii ansixiyay ku noqoshada miisaaniyada 2020, taasoo la kordhiyay $35 boqolkiiba.
Guud ahaan kharashka miisaaniyadda la ansiiyay ayaa dhan $646.9 milyan oo ka kooban kharashaad mashaariic iyo kharashaad howl fulineed, waxayna kala yihiin; Kharashaadka mashaariicda oo korordhay $40.9 milyan, halka Kharashaadka howl fulinta dowladda ay ku korortay $129.9 million.
Kororkan kharashaadka ayaa loo adeegsanayaa la taacaalida cudurka Covid-19, doorashooyinka, daadadka iyo xaaladaha bini’aadamnimo ee dalka la soo dersay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Raysulwasaaraha.
“Dakhliga guud ee dowladda ayaa hoos u dhacay sababo la xiriira xaaladaha COVID-19 iyada oo la qiyaasay in ku dhowaad $67 Milyan oo la odorosayay inay dakhilaga gudaha ka soo xerooto ay meesha ka baxayso, balse maadaama dalka deynta laga cafiyay waxa uu helayaa kaalmo toos ah, taas oo buuxineysa hoos u dhaca dakhliga gudaha.” Ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Kutalogalka miisaaniyada 2020 oo golaha wasiiradda ay meelmariyeen dabayaaqadii 2019 ayaa ahaa 460 milyan.